Tartaric Acid ogyahay sida diamond oo khamri ah - Shiinaha Hailan technology-bio
potassium DL- tartrate hydrogen
potassium Dl- sodium tartrate
Tartaric Acid ogyahay sida diamond oo khamri ah
Aan la taaban karin, Just furo sibraar khamri ah, guf ku lifaaqan ee qaybo yaryar oo cufan oo ah jajabka dhalooyinka, taas oo tartaric acid, waxaa jira magac fiican - dheeman khamri. Like dhan acids organic, ka timaado muddo midabka berry canab ah, taas oo la aasaasay by Neefta ka mid ah qaybaha cagaaran ee dhirta iyo iska soo dadajin casiir canab guranaya oo si cajiib leh, laakiin uusan saamayn ku lahayn tayada oo khamri ah.
Erayga "ilkeed" qaar ka mid ah saaxiibada waxaa laga yaabaa in qaar ka mid ah la yaab leh. "Ilkeed" sababta, sidee baa u qabanqaabiyey?
kiristaalo Khamrigu - formation of ilkeed, qayb weyn waa ka acid ee tartaric khamri (Tartaric Acid), maxaa yeelay, khamriguna waa lagu kaydin jawi gaar qabow. Qaabka uu kiristaalo ilkeed ah, ma jiraan wax sharci gaar ah, iyo mararka qaarkood dhegdheg, sida caadiga ah ku lifaaqan hoose ee dhalada, garabka ama muuqan hoose ee guf ah.
Cinabka dheeraad ah la kariyey, sare saamiga tartaric acid. The dheer canab ah u koraan on geedaha canabka ah, muddo dheer mar si uu u nuugo macdanta dheeraad ah ka ciidda, iyo macdanta in kulan tartaric acid saarta ilkeed. kiristaalo, kuwaas oo aan la dhexgelin doono khamri ah, laakiin roobabka ee derbiga khamri dhalada, hoose ee dhalada, geedkii ama roobab hore ee foosto oo khamri ah. khamri White muuqaalka tartaric acid, u muuqataa ilaa xad sida sonkorta cad, iyo khamri ah cas oo dhagax baraf, ka dibna muujinaya a kiristaalo guduud dhiig u eg, oo waxaa ma fududa in la ogaado ashitada.
dhagax guridda uusan saamayn ku lahayn tayada oo khamri ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira xiriir aad u xiiso badan, oo khamrigii, habka halsano ah waa mid gaabis ah, caraf udgoon khamriga la ilaaliyo si aad u wanaagsan. The gaabis ah habka halsano ah waa, ka yar ilkeed la aloosnayd baaldi iyo ka badan waa in dhalada. Sidaas darteed, ilkeed ee dhalada waxaa laga yaabaa in sumadda shaqada fiican ee winemaker iyo tayada fiican khamriga.
Khamrigu gudaha crystallization ma aha dhibaatada tayo leh, ma aha dhibaato oo kaliya, laakiin khamriga ee geedi socodka halsano ah iyo habka baaluq, gaar ahaan habka of maturity soo saari doonaa walxaha, waa calaamad ka mid ah khamri baaluq. Sababtoo ah saamaynta dhadhan khamri ah waxyaabaha la deganayn ayaa kala khamriga, si ay khamrigii sii saafi ah, qaab-dhismeedka dhadhan dheeraad ah oo deggan, dhadhanka iyo sifaynta more mellow. tayada oo khamri ah oo tayo sare leh oo keliya ayaa yeelan doonaan soo dadajin in uu yahay dhagax ilkeed. Nadiifi, khamri hufan sidoo kale u muuqan kara faar - dhagax crystal (kiristaalo Khamri). Haddii khamriga u muuqataa xaaladda noocan oo kale ah, taasi ma saamayn doonto dhadhanka oo khamri ah, laakiin ka dib markii aan la kala diri karaa formation of dhagax crystalline si loo soo celiyo.
The "jawharad" khamri sidoo kale waxaa laga heli doonaa in ka raagay dhallinyarada, taas oo daliil u ah in content macdanta oo khamri ah si gaar ah u sarreeya. Laakiin wax badan oo weli ka jira ama ka weyn, tayada ee gaar sare ee khamriga. Haddii ilkeed la aloosnayd on goolhayaha geedkii ama dhalada, waa calaamad ka mid ah kaydinta sii dheeraaday. Khubarada u wac "ilkeed jir ah", crystallization ee waaweyn, waxaa si tartiib tartiib ah soo saaray muddo.
waqti Post: Mar-28-2017
Anhui technology-bio co hailan., LD
Waxyaabaha ay ka kooban tuhun qabo Shiinaha 2017